पछिलो २४ घन्टामा कति थपिए को’रोना संक्रमित, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो अपडेट ! – Gandaki Chhadke
पछिलो २४ घन्टामा कति थपिए को’रोना संक्रमित, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो अपडेट !
By गण्डकी छड्के Last updated May 22, 2021
काठमाडौं ।नेपालमा पछिलो २४ घन्टामा थप ८९८० जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर बिधि र एन्टीजेनविधिबाट गरिएको परिक्षणमा ८९८० जनालाई को’रोना पुष्टि भएको हो ।
आज थपिएका सहित अहिलेसम्म नेपालमा ५ लाख १० हजार ८६ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ ।त्यस्तै नेपालमा को’रोना संक्रमित नि’को हुने क्रम ह्वातै बढेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार ८४८ संक्रमित नि’को भएका छन् । एकैदिन संक्रमणमु’क्त भएका संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
योसँगै सं’क्रमणमुक्त हुनेको संख्या ३ लाख ८३ हजार ६८४ पुगेको छ ।यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर भने १२९ संक्रमितको मृ’त्यु भएको छ । यस संगै को’रोनाबाट ज्यान गु’माउनेको संख्या ६१५३ पुगेको छ ।अहिले १ लाख १५ हजार ८०६ जना संक्रमित आ’इसोलेसनमा छन् ।
त्यस्तै को’रोना संक्रमणबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखाका प्रबन्धक रविन्द्र मण्डलको शनिबार बिहान ९ः०० बजे नि’धन भएको छ । धनुषा जिल्ला वि’धेह नगरपालिका वडा नं ५ मुडिया घर भएका प्रबन्धक मण्डल बिगत ४ बर्ष देखी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखामा कार्यरत रहेका थिए ।
रामेछापमा को’रोना सङ्क्रमण भै आफ्नै जिल्ला धनुषाको जनकपुर स्थित जानकी हे’ल्थ कि’यरमा उपचारका क्रममा मण्डलको आज ९ः०० बजे नि’धन भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखाका बरिष्ठ सहायक सुदर्शन पौडेलले जानकारी दिए ।मण्डल विगत ४ वर्षदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखामा शाखा प्रबन्धकमा कार्यरत रहेका थिए ।
स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका जनस्वास्थ्य अधिकृत भुवन थापाका अनुसार मण्डललाई वैशाख २५ गते ए’न्टिजेन्ट परीक्षण गर्दा को’रोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । को’रोना सङ्क्रमपछि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि थप उपचारका लागि परिवारले गृह जिल्ला धनुषा लगेका थिए ।
लकडाउनले ‘कञ्चनजङ्घाको सौन्दर्य हेरिदिने कोही भएन’
व्यवसायीले चीनबाट ल्याएको सिलिण्डरको नो’जलमा स’मस्या, अक्सिजन भर्न मिलेन